Terms of Service - Tai mukudhinda & kupakata Co, Ltd.
Ndokumbirawo kuti muverenge aya mazwi uye mamiriro zvakanyatso. Izvo zvine ruzivo rwakakosha zvine chekuita nekasitoma ("Mutengi") kodzero dzepamutemo, garandi, zvisungo uye mhinduro dzekugadzirisa kusawirirana.
Tai mune kurongedza iri pamwe yakasimbiswa neShanghai Anxin Packaging, Henan Lufeng Packaging, Zhejiang Xinya Packaging, Jiangsu Shanyi Packaging, uye Zhejiang Dazuo Packaging. Sezvo yega kambani yekugadzira ichiburitsa dzakasiyana dzakateerana dzezvigadzirwa, iyo yakasimbiswa kambani inogona kuve zvirinani ine yakazara yakazara zvigadzirwa izvo zvinogona kuratidzira uye kushandira vatsva nevakuru vatengi. Tine makore makumi matatu ekuziva ruzivo mumunda wepepa kurongedza, yakazvipira kupa yakakwira-magumo, nyowani dhizaini yemabhokisi ekupakata.
Kana iwe uine chero mibvunzo nezve Webhusaiti kana iyo Mashandisiro Ekushandisa, ndapota nyorera: service@taiinpackaging.com.
Nekuwana uye kubatanidza kune Webhusaiti kubva kune chero chishandiso kusanganisira asi isina kuganhurirwa kune; kubhurawuza iyo Catalog kuburikidza neWebhusaiti, kuverenga zvimwe zvikamu zveWebhusaiti kana kuita nhare kuburikidza neWebhusaiti, Unobvuma kubvuma nekuteerera neMitemo yekushandisa uye nePolisi Yakavanzika iyo zvakare ine ruzivo maererano neCookies uye mashandisiro avo. Kana Iwe ukasabvumirana zvizere kana muchidimbu neMitemo iyi yeSevhisi kana Yakavanzika Policy, Iwe unofanirwa kusiya iyo Webhusaiti uye kurega kushandisa masevhisi ayo nekukasira. Tai mumapakeji anogona kubva nguva nenguva achinje kana kugadzirisa zvese kana chikamu cheiyi Mitemo yeSevhisi kana Yakavanzika Policy. Tai mupakeji saka anokuraira kuti uverenge Mitemo Yekushandisa nguva dzose uye uprinte kopi yeiyi Mitemo Yekushandisa kuitira ramangwana.
Kuwana iyo Webhusaiti mahara. Kuwana iyo Webhusaiti kunotenderwa pahwaro hwekuti Tai ari mupakeji anogona, mukufunga kwake uye pasina ziviso, kugadzirisa / kukanzura / kukanganisa / kumisa chero chikamu cheWebhusaiti kana icho chazara. Tai mune yekupakata haina mutoro kwauri kana chero wechitatu bato, kana chero chikamu kana iyo yese Webhusaiti isingasvikike, kuwanikwa kana kuwanikwa chero chikonzero chero chipi zvacho.
Ruzivo rwunopihwa paWebhusaiti, uye mukati meKatalog, ndeye ruzivo rwevanhu chete uye haigadzire kana kuvaka yekutengesa kana yekutenga chibvumirano kana kupihwa chero mhando. Ruzivo rwekuwedzera runogona kukumbirwa kuburikidza ne 'CONTACT US' peji reWebhusaiti.
Iwe Unofanira kubvuma:
• kusabereka, kuteedzera, kuteedzera kana kutengesa zvakare chero chikamu cheWebhusaiti;
• kusapinda pasina mvumo, kupindira, kukanganisa kana kukanganisa:
- chero michina kana netiweki yakachengetwa Webhusaiti;
- chero software inoshandiswa mukupa iyo Webhusaiti; kana
- chero michina kana network kana software zvine kana zvinoshandiswa nechero munhu wechitatu.
Pasina kukamurwa, mifananidzo yese, tsananguro, mavhidhiyo uye mifananidzo uye zvese zvirimo mukati meWebhusaiti neCatalog zvivakwa zveHCP Boka. Unobvumidzwa kushanyira Webhusaiti, kupurinda uye kuteedzera mifananidzo, uye kutumira mifananidzo iriko paWebhusaiti yekushandisa pachako zviri pamutemo chete kwete kuitisa zvekutengesa kana kutengesa zvakare. Iwe haubvumidzwe kuteedzera zvakakwana kana muchidimbu Webhusaiti uye iyo Catalog pasina mvumo yakananga yeTai mumapakeji
Tai mune kurongedza haina mhosva yekukuvara kana kukanganisa kunokonzerwa nezvikanganiso, mavhairasi, kusiiwa, mafaira akashata, nyaya dzekubatanidza, kutadza kwemidziyo, kana kubviswa kwezviri mukati.
Tai ari mupakeji anotengesa ayo akazara kupa kune Bhizinesi Vatengi, uku achishandirawo vanhu. Kazhinji iwo mudiki odhita ndeye 2000-5000 zvidimbu pa dhizaini.
Tinogona kupa dzakasiyana nzira dzekudhinda: iko kudhinda kwechidzitiro, kupisa kutsika, kudhinda neoffset,
kunyora uye nezvimwe.
Yedu yekugadzira nguva inogara iri 20-25days mushure mekutanga-kugadzirwa sampuro yekusimbisa. Kana chikumbiro chako chekukanzura chikaonekwa tisati tagadzirisa odha yako, tinofara kukanzura odha yako kuti uwane mari izere, asi kana odha yacho yaitika, hatichakwanise kuikanzura.
Kudzoka & Shanduko
Ose maodha emahara ari ekupedzisira uye haakwanise kudzoserwa kana kuchinjaniswa.
Zvinhu Zvakakuvara / Zvikanganiso Zvekuraira
Kunyangwe chimwe nechimwe chigadzirwa chichiongororwa kuti ive yehutano vimbiso isati yatumirwa, zvinokwanisika kugamuchira chinhu chakakuvadzwa. Uye zvakare, nekuda kwekukanganisa kwevanhu, kurongeka zvikanganiso zvinogoneka. Nezvikonzero izvi, zvakakosha kuvhura & kuongorora zvinhu zvako nekukurumidza kana uchinge wazviwana.
Ndokumbira utizivise mukati memazuva mashanu ebhizinesi ekugamuchira yako package kana paine chero chinhu chakashata neodha yako. Hatigone kukudza shanduko kunze kwemafuremu enguva, sezvakataurwa mukati memitemo yedu.
Tai mumapakeji haakonzeri kurasikirwa chero kupi kana kukuvara kunoitika nekuda kwekunonoka kana kutadza kununura kunokonzerwa nezviito zvaMwari; mamiriro okunze akakomba; hondo; njodzi inowanzoitika; moto; stereki; kukanganiswa kwevashandi; kunonoka kuendesa zvinhu kana zvinhu nevatengesi; kumisikidzwa kwehurumende, mirau, kuderedzwa kwemutengo kana kudzora; tsaona; kunonoka kwevanowanzovatakura; kunonoka kubvumidzwa kwetsika; kana kubva kune chero chimwe chikonzero chisinga dzivike kana kupfuura Tai mukutakura zvine musoro kutonga. Chero zuva rekusvitswa rinogona kuwedzerwa, paTai mune yakasarudzika sarudzo, kusvika padanho chero kunonoka kunokonzerwa nechisimba majeure chiitiko.
Kisimusi Chipo Bhokisi, Kukwidziridzwa Chipo, Yekusimudzira Bhegi, Chipo Bhokisi, Corrugated Carton Bhokisi, Lamination Chipo Bhokisi,